Oovimba be-UNIUSD-Funda ukurhweba
Ucazululo lwexabiso le-Uniswap - nge-27 kaJanuwari
Kwimeko apho iibhere zikwazi ukwenza uxinzelelo lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-10 yeedola, ixabiso lingancipha kwinqanaba lenkxaso kwi-6 kunye ne-4 yeedola. Ukungaphumeleli ukudiliza inqanaba le-$ 10 ngamabhere, ixabiso le-Uniswap linokunyusa ukuya kwi-$ 12, i-$ 14 kunye ne-$ 16 yamanqanaba exabiso.
Amanqanaba okumelana: $ 12, $ 14, $ 16
Amanqanaba enkxaso: $ 10, $ 6, $ 4
I-Uniswap ibhebhile kwimbonakalo yexesha elide. Iibhere zisabambe imakethi ye-Uniswap nangona isantya esiphantsi. Uxinzelelo lweebhere luzama ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-10 yeedola kodwa inqanaba elikhankanyiweyo libambe ixabiso. Iibhere ziqokelela umfutho oya kukwanela ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-10 yeedola. Ixabiso liphakathi kwe-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, nge-27 kaJanuwari
Uniswap uhlala ngaphantsi kwee-EMA ezimbini, qhubeka uthengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye ne-21 ye-EMA ebonisa ukunyuka kwe-bearish. Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) ungaphantsi komndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Kwimeko apho iibhere zikwazi ukwenza uxinzelelo lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-10 yeedola, ixabiso lingancipha kwinqanaba lenkxaso kwi-6 kunye ne-4 yeedola. Ukungaphumeleli ukudiliza inqanaba le-$ 10 ngamabhere, ixabiso le-Uniswap linokunyusa ukuya kwi-$ 12, i-$ 14 kunye ne-$ 16 yamanqanaba exabiso. Nangona kunjalo, i-Relative Strength Index igoba phantsi kumanqanaba angama-20 abonisa uphawu lokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Uniswap iyahluka. Ukunyuka kweebhere kuyancipha kwinqanaba lenkxaso ye-10 yeedola kwaye i-bearish movement ayikwazanga ukuqhubeka. Ngendlela efanayo, isantya senkunzi yenkomo sibuthathaka kwaye asikwazanga ukuphula izinga lokumelana ne-$ 12. Ixabiso liphakathi kwe-$ 12 kunye nexabiso lexabiso le-$ 10.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-27 kaJanuwari
U-Uniswap uthengisa ngaphantsi kwe-9 amaxesha e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-20 ukugoba ukubonisa umqondiso wokuthenga onokuthi ube yi-pullback.
Uniswap (UNIUSD) Xabiso May Qalisa iBullish Movement
Ucazululo lwexabiso le-Uniswap - nge-20 kaJanuwari
Xa inqanaba lokuxhasa i-$ 14 livavanywa kwaye liphukile phantsi, izinga lexabiso lingancipha ukuya kwi-$ 12 kunye ne-$ 9 amanqanaba okuxhasa. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zazikwazi ukukhusela inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, i-Uniswap inokubhobhoza ukuya kumanqanaba okumelana ne-16, i-$ 18 kunye ne-$ 19.
Amanqanaba okumelana: $ 16, $ 18, $ 19
Amanqanaba enkxaso: $ 14 $ 12, $ 9
Kwixesha elide i-Uniswap ibhere. Kwiveki ephelileyo, i-crypto yayizama ukwenza iphethini yetshathi ephantsi kabini. Abathengi be-Uniswap babemiselwe ukuba banyuse ixabiso. Yaqala ukunyuka ukuya kumanqanaba okumelana ne-$ 18 kodwa abathengisi bachasene nentshukumo ye-bullish kwinqanaba elisanda kuthethwa lokumelana ngoJanuwari 17. Ixabiso ngoku liyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso kwi-14 yeedola.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, nge-20 kaJanuwari
Kukho into ebonisa ukuba ukunyuka kweebhere kuyanda njengoko i-Uniswap ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Umndilili ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) uwela umndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA) ezantsi. Xa inqanaba lokuxhasa i-$ 14 livavanywa kwaye liphukile phantsi, izinga lexabiso lingancipha ukuya kwi-$ 12 kunye ne-$ 9 amanqanaba okuxhasa. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zazikwazi ukukhusela inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, i-Uniswap inokubhobhoza ukuya kumanqanaba okumelana ne-16, i-$ 18 kunye ne-$ 19. I-Relative Strength Index igoba kumanqanaba angama-40 abonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, u-Uniswap unebeare. Inqanaba lokumelana ne-$ 18 lime njengesithintelo kwiinkunzi zeenkomo. Iibhere zichasile ukunyuka kwexabiso okwaqala kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Iinkunzi zenkomo zilahlekelwa ngamandla kwinqanaba lexabiso le-18 kwaye iibhere zathatha imarike. I-crypto ngoku iqhubela phambili kwi-low yangaphambili kwizinga lexabiso le-14 yeedola.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-20 kaJanuwari
Ukungatshintshi (UNIUSD) Ixabiso liyabuyela umva kwiRest ye-14 yeNqanaba leNkxaso
Ucazululo lwexabiso le-Uniswap - nge-06 kaJanuwari
Ukukwazi ukudiliza inqanaba lenkxaso eliguquguqukayo linokunciphisa ukuya kwi-14 yangaphambili ephantsi, ngaphantsi kwinqanaba le-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba okuxhasa. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zazikwazi ukwenza uxinzelelo lokuchasa iibhere, ixabiso linganyuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 18, i-$ 22 kunye ne-$ 24 amanqanaba.
Amanqanaba okumelana: $ 18, $ 22, $ 24
Amanqanaba enkxaso: $ 14 $ 12, $ 6
I-Uniswap ibhebhile kwimbonakalo yexesha elide. Amandla e-bearish aqhubele ingqekembe kwizinga eliphantsi le-$ 14 yenkxaso. Inqanaba elikhankanywe liphethe ingqekembe kwaye ixabiso alikwazanga ukuhla ngakumbi. Iinkunzi zeenkomo ziqokelela umfutho othe kratya kwaye kwaveliswa amakhandlela amaninzi emihla ngemihla abonisa ukwanda koxinzelelo lweenkunzi. Ixabiso liye lavavanya inqanaba lokumelana ne-$ 18 kwaye libuyisela umva okwangoku.
Uniswap itshathi yemihla ngemihla, nge-06 kaJanuwari
I-Uniswap ithengisa kancinci ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ebonisa ukunyuka kwesantya se-bearish. Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) uzama ukuwela umndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA) ezantsi. Ukukwazi ukudiliza inqanaba lenkxaso eliguquguqukayo linokunciphisa ukuya kwi-14 yangaphambili ephantsi, ngaphantsi kwinqanaba le-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba okuxhasa. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zazikwazi ukwenza uxinzelelo lokuchasa iibhere, ixabiso linganyuka kwinqanaba lokumelana ne-$ 18, i-$ 22 kunye ne-$ 24 amanqanaba. Nangona kunjalo, i-Relative Strength Index igoba phantsi kumanqanaba angama-45 abonisa uphawu lokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, u-Uniswap ubhira. I-crypto bounces kwinqanaba lenkxaso ye-$ 14 ngoDisemba 20. Ixabiso liye landa ngokuthe ngcembe kwinqanaba lokumelana ne-$ 18 kwaye lidibanisa iintsuku ezimbalwa. Okwangoku, iibhere zihamba phambili kwiinkunzi zeenkomo kwinqanaba elikhankanywe ngasentla kwaye ngokuthe ngcembe libuyela kwinqanaba lenkxaso ye-14 yeedola.
Uniswap itshathi yeeyure ezi-4, nge-06 kaJanuwari
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap - nge-30 kaDisemba
Amandla okuphula inqanaba lokumelana kwinqanaba lexabiso lama- $ 18 linokunyusa liye kuthi xhaxhe kuma-22 eedola nakuma-24 amanqanaba okuxhathisa. Kwimeko apho iibhere zikwazile ukwenza uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso yeedola ezili-14, ixabiso linokuhla liye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-12 kunye nele-6.
I-Uniswap ibhebhile kwimbonakalo yexesha elide. Amandla e-bearish aqhubele ingqekembe kwizinga eliphantsi le-$ 14 yenkxaso. Inqanaba elikhankanywe liphethe ingqekembe kwaye ixabiso alikwazanga ukuhla ngakumbi. Iinkunzi ziqokelela umfutho othe kratya kwaye kwaveliswa amakhandlela emihla ngemihla abonisa ukwanda koxinzelelo lweenkunzi. Ixabiso liye latsala umva ukunyanzeliswa kwenqanaba le-18 yeedola kwaye ngoku libuyisela intshukumo ye-bearish.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, nge-30 kaDisemba
Uniswap uthengisa ngezantsi kancinci kwamaxesha ali-9 EMA kodwa ngaphezulu kwamaxesha angama-21 e-EMA ebonisa ukuhla kwesantya se-bullish. Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) uzama ukuwela umndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA) phezulu. Ukukwazi ukuphula inqanaba lokumelana nenqanaba lexabiso le-18 lexabiso linokunyuka ukuya kwi-$ 22 kunye ne-$ 24 amanqanaba okumelana. Kwimeko apho iibhere zikwazi ukwenza uxinzelelo lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso lingancipha kwinqanaba lenkxaso kwi-12 kunye ne-6 yeedola. Nangona kunjalo, i-Relative Strength Index igoba ngaphantsi kwamanqanaba angama-50 abonisa uphawu lokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, u-Uniswap ubhira. I-crypto bounces kwinqanaba lenkxaso ye-14 yeedola ngoDisemba 20. Ixabiso likhula ngokuthe ngcembe kwinqanaba lokumelana ne-$ 18. Okwangoku, iibhere zichasa iinkunzi kwinqanaba elikhankanywe ngasentla kwaye ngokuthe ngcembe libuyisela umva elinokuthi libe yi-pullback.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-30 kaDisemba
Uniswap (UNIUSD) Ufumana iNkxaso kwiNqanaba eliBullish eliBullish eliBuyisayo
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap - nge-23 kaDisemba
Ixabiso le-Uniswap linokwenyuka ukuya kwi-18 yeedola kwaye lingene kuyo ukuya kuthi ga kwi-22 yeedola kunye nexabiso lexabiso le-24 yeedola ezibonelele ukuba iinkunzi zigcina amandla azo. Kwimeko yokunyusa uxinzelelo lweebhere ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso lingancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso kwi-12 kunye ne-6 yeedola.
Amanqanaba enkxaso: $ 14, $ 12 $ 6
Uniswap ukwimeko entle kwimbonakalo yexesha elide. Ixabiso lihlala lihlala kwiveki ephelileyo, nangona bekungekho ntshukumo ibalulekileyo kwimarike ye-Uniswap. NgoDisemba 21, uxinzelelo lweBulls luyanda ngokusekwa kwamakhandlela anamandla emihla ngemihla. U-Uniswap okwangoku ujolise kwinqanaba lokumelana ne-18 yeedola.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, nge-23 kaDisemba
Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) uzama ukuwela umndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA) phezulu. U-Uniswap uye wawela i-EMA ezimbini phezulu kwaye ithengisa ngaphezu kwexesha le-9 le-EMA elibonisa ukunyuka kwesantya senkunzi yenkomo. Ixabiso le-Uniswap linokwenyuka ukuya kwi-18 yeedola kwaye lingene kuyo ukuya kuthi ga kwi-22 yeedola kunye nexabiso lexabiso le-24 yeedola ezibonelele ukuba iinkunzi zigcina amandla azo. Kwimeko yokunyuka kwengcinezelo yeebhere ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso linganciphisa kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Uniswap ikwintshukumo ye-bullish. Iibhere zathatha imarike kwiinkunzi zeenkomo ngoDisemba 03. Oku kubonakala ngokucacileyo xa amakhandlela amaninzi e-bearish aveliswa kwaye ixabiso lawela kwinqanaba lenkxaso ye-14 yeedola. Ixabiso beliphakathi kwi-14 yeedola kwiveki ephelileyo. Izolo, iinkunzi zeenkomo zifumana amandla kwaye ixabiso liyanda ukuya kwinqanaba lokumelana ne-18 yeedola.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-23 kaDisemba
Uniswap (UNIUSD): Kwi-Case Bulls Ikhusela i-$ 14 yeNqanaba leNkxaso, ixabiso linokuthi libuyisele umva
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap - nge-16 kaDisemba
Kwimeko yokunyusa uxinzelelo lweebhere ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso linganciphisa kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba. Ixabiso le-Uniswap linokunyuka ukuya kwi-$ 19, i-$ 22 kunye ne-$ 24 amanqanaba exabiso elinikezelweyo ukuba iinkunzi zikhusele inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola.
Amanqanaba okumelana: $ 19, $ 22, $ 24
I-Uniswap ibhebhile kwimbonakalo yexesha elide. Kwiveki ephelileyo, kwakungekho ntshukumo ebalulekileyo kwimarike ye-Uniswap, nangona ixabiso lihlala lihlala kwitshathi yemihla ngemihla. Kwakukho i-pullback xa ixabiso lifikelela kwinqanaba lenkxaso yangaphambili ye-$ 19 ngoNovemba 27. Inqanaba lokumelana ne-$ 22 lihlaziywe kwakhona. Ukulandela imeko kukubunjwa kwekhandlela eligubungela i-bearish elenza ixabiso lehla ukuya kwinqanaba le-14 yeedola.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, nge-16 kaDisemba
Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) ungaphantsi komndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). U-Uniswap uye wawela ii-EMA ezimbini ezantsi kwaye ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kwinqanaba elisondeleyo elibonisa ukuhla kwesantya seebhere. Kwimeko yokunyusa uxinzelelo lweebhere ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso linganciphisa kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba. Ixabiso le-Uniswap linokunyuka ukuya kwi-$ 19, i-$ 22 kunye ne-$ 24 amanqanaba exabiso elinikezelweyo ukuba iinkunzi zikhusele inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola. I-Relative Strength Index igoba kumanqanaba angama-40 abonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, u-Uniswap ukwintshukumo ejikelezayo. Ukunyakaza kwe-bullish akukwazanga ukuqhubeka njengoko iinkunzi zeenkomo zilahlekelwa ngamandla kwinqanaba lokumelana ne-$ 22. Iikhandlela ezingaphezulu ze-bearish zaveliswa kwaye ixabiso lawela kwinqanaba lenkxaso ye-14 yeedola. Ixabiso liye lahluka ngaphakathi kwe-$ 19 kunye ne-$ 14 amanqanaba.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-16 kaDisemba
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-50 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
Uniswap (UNIUSD) Utshintsha uMkhombandlela ukuya kwiBullish Trend
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap - nge-09 kaDisemba
Xa uxinzelelo lweebhere lukhula ngakumbi ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso linganciphisa kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso le-Uniswap linganyuka ukuya kwi-$ 19, i-$ 22 kunye ne-$ 24 yamanqanaba exabiso. I-Relative Strength Index igoba kumanqanaba angama-40 abonisa uphawu lokuthenga.
I-Uniswap ibhebhile kwimbonakalo yexesha elide. Kwakukho intshukumo ejikelezayo ngaphakathi kwe-24 yeedola kunye ne-27 amanqanaba exesha elide leentsuku. I-bearish movement yaqala ngoNovemba 15 xa kukho i-bearish breakout kwinqanaba le-24 yeedola. Ixabiso lehla ukuya kwinqanaba le-$ 19 kwaye lihlehlisiwe. Isantya se-bullish saba buthathaka xa sidibana ne-confluence kwinqanaba lokumelana ne-22 yeedola. Ixabiso le-Uniswap liyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-14 yeedola kwaye ngoku itsalela umva ukuvavanya kwakhona inqanaba lokuchasa okuguquguqukayo.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, nge-09 kaDisemba
U-Uniswap uye wawela ii-EMA ezimbini ezantsi kwaye ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kwinqanaba elisondeleyo elibonisa ukuhla kwesantya seebhere. Umyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) ungaphantsi komndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Xa uxinzelelo lweebhere lukhula ngakumbi ukudiliza inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso linganciphisa kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 12 kunye ne-$ 6 amanqanaba. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso ye-14 yeedola, ixabiso le-Uniswap linganyuka ukuya kwi-$ 19, i-$ 22 kunye ne-$ 24 yamanqanaba exabiso. I-Relative Strength Index igoba kumanqanaba angama-40 abonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyenziwa. Intshukumo ye-bearish ayinakuqhubeka njengoko iibhere ziphulukana namandla kwinqanaba lenkxaso le- $ 14. Ipateni yekhandlela laseMarubozu kwaye i-Uniswap inyuka ngokuthe chu ukuya kwinqanaba lama- $ 19. Iinkunzi zeenkomo zibuyisela ixabiso kwi-bullish mkhuba okwangoku.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-09 kaDisemba
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-60 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
Uniswap (UNIUSD) Ixabiso leeBounces kwiNqanaba leNkxaso ye-19 yeedola
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap - nge-02 kaDisemba
Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa uxinzelelo lwazo, ixabiso lingatyhalwa ukuba livale ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-22 yeedola, ixabiso linokuvavanya amanqanaba okumelana ne-24 kunye ne-27 yeedola. Kwimeko apho ixabiso lehla kwinqanaba lenkxaso ye-19 yeedola, linganciphisa ukuya kwi-$ 14 kunye namanqanaba e-$ 12.
Uniswap is bullish kwinkangeleko yexesha elide. Emva kokuba i-cryptocurrency iqhamuke kwintshukumo ejikelezayo ngaphakathi kweedola ezingama-27 kunye needola ezingama-24 kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ingqekembe yaqala ukuhla kwexabiso kunye nokuqulunqwa kwekhandlela elinamandla lemihla ngemihla elingena kwinqanaba lenkxaso ye-$ 24 kwaye ixabiso livavanya inqanaba lenkxaso ye-19 yeedola. Inqanaba elikhankanyiweyo libambe kwaye ixabiso lidibanisa ngaphakathi kwe-$ 22 kunye ne-$ 19 amanqanaba kwiveki ephelileyo. Namhlanje, ikhandlela lemihla ngemihla lizama ukungena kwinqanaba lokumelana ne-$ 22.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, nge-02 kaDisemba
Isimboli se-bullish sizama ukuseka njengoko ixabiso lirhweba ngaphezulu kwamaxesha esi-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Uniswap uwela ii-EMA ezimbini phezulu, Ixabiso lithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini. Xa iinkunzi zeenkomo zonyusa uxinzelelo lwazo, ixabiso lingatyhalwa ukuba livale ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-22 yeedola, ixabiso linokuvavanya amanqanaba okumelana ne-24 kunye ne-27 yeedola. Kwimeko apho ixabiso lehla kwinqanaba lenkxaso ye-19 yeedola, linganciphisa ukuya kwi-$ 14 kunye namanqanaba e-$ 12. Isalathiso samandla ahambelanayo sikumanqanaba angama-50 abonisa i-bearish direction.
Uniswap is bullish kwitshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba lenkxaso kwi-19 yeedola ligatya ukuncitshiswa kwexabiso elongezelelweyo ngoNovemba 30. Ikhandlela le-bullish engulfing lenziwe kunye nokunyuka kwexabiso ngokubhekiselele kwinqanaba lokumelana ne-$ 22. Iinkunzi zizama ukutyhala ixabiso ngaphezu kwexabiso lexabiso le-$22. Okwangoku, ixabiso lizama ukuphula inqanaba elikhankanywe ngasentla.
I-UNIUSD itshathi yeeyure ezi-4, nge-02 kaDisemba
I-Uniswap ithengisa ngaphezu kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esihambelanayo se-14 lingaphezulu kwamanqanaba angama-60 abonisa isalathiso se-bullish.